I-Plaas Eendag - I-Airbnb
Beestekraal, North West, iNingizimu Afrika
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Judy
Siqasha le ndlu ebanzi enamakamelo ama-4 emi epulazini lethu lezilwane ezizimele. Ipulazi linezinhlobo ezimbalwa zezinyamazane kanye nezinhlobo zezinyoni ezizulazula ngokukhululeka endaweni engenamalaleveva. Ungabuka umdlalo ngezinyawo noma ngebhayisikili. (Sicela uqaphele: Ipulazi lisehlathini, okusho ukuthi kunezinambuzane eziningi. Sicela uphathe imithi exosha izinambuzane)
IPlaas Eendag iyipulazi lezilwane ezifuywayo eliphethwe ngumuntu ozimele, elisendaweni yezitshalo eziluhlaza endaweni yaseBeestekraal, ephakathi kweBrits neRustenburg. Ubumfihlo bokugcina ehlathini yikho okwenza le ndawo yokubalekela ihluke kunoma iyiphi enye ipulazi lezilwane. Njengoba kunendlu kuphela nezindlu zangasese ezimbili ezivulekele umphakathi, uqinisekiswa umuzwa onokuthula wasehlathini kanye nokunaka okugcwele kwabaphathi. Jabulela indawo ebabazekayo, ukuthula okunokuthula nendawo enhle yasehlathini,
Indlu yasepulazini ebanzi, ehlome ngokuphelele, ebiyelwe, ilala 8 futhi inezindawo zokupaka ezanele emagcekeni. Ichibi elicwebezelayo elibheke ekushoneni kwelanga okuhle, elihambisana nevulandi elingaphandle kanye ne-braai, lenza izinto ezingasoze zalibaleka futhi eziphumuzayo. Indlu inamakamelo okulala amane okukhona kuwo amakhulu ane-air conditioning kanti i-en suite ingelinye lamagumbi okugezela amathathu esimanje, asanda kulungiswa endlini.
Ama-chalets amabili, ngayinye enekamelo lokulala elikhulu nendawo ephezulu, ilala abantu abane. Ngaphandle kocingo, uhlangana nezilwane ezihlukahlukene lapho uphuza ikhofi lakho lasekuseni kuvulandi. Ifakwe ngokugcwele futhi ibekwe enhliziyweni yepulazi, ukuhlala kungase kuzwakale njengokuthi "Glamping" ngaphandle kwakho konke okunethezeka okufana nogesi namanzi ashisayo.
Ukubuka izinyoni kudumile endaweni, ababukeli bezinyoni abashisekayo babike ukuthi babone izinhlobo ezingaphezu kuka-100. I-Plaas Eendag iphephile ukuhamba ngezinyawo noma ukuya ohambweni lwamabhayisikili uwedwa. Jabulela amahora amabili, ukushayela kwegeyimu kwangasese, okuphelele ngesiphuzo esitholakalayo endaweni eyi-60m2 ebheke umfula. Izingane kanye nabantu abadala ngokufanayo, bayakujabulela ukubhukuda endaweni yokugcina amanzi epulazini, benza konke okusemandleni ukuthola ulwazi lwasepulazini.
Endlini enkulu kunendawo yokuzijabulisa enetafula le-pool, indawo yokubeka imali yetafula lethenisi kanye nomgodi wokucisha umlilo we-boma. Ukudla kwasekuseni kanye ne-Buffet braai-suppers kuyatholakala uma kubhukhwe kusenesikhathi.
Umphathi we-Plaas Eendag PR, u-Judy, unesipiliyoni seminyaka engu-20 embonini yokudla neziphuzo futhi umagange ukusingatha umsebenzi wamaphupho akho. Kungaba isikhumbuzo, usuku lokuzalwa, i-bachelor noma i-bachelorette. Ku-lapa yokuzijabulisa noma emphemeni wamapulangwe? U-Judy ulungele ukubhekelela zonke izidingo zakho zephathi.
4.66 out of 5 stars from 122 reviews
4.66 · 122 okushiwo abanye
Proud houst of the beautiful Plaas Eendag
U-Judy kanye no-Austin bazoba ucingo lwazo zonke izidingo zakho